काठमाडौंभन्दा लुम्बिनीको वायु तीन गुणा बढी प्रदुषित ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौंभन्दा लुम्बिनीको वायु तीन गुणा बढी प्रदुषित !
वायु प्रदुषण भन्ने वित्तित्कै काठमाडौं नसम्झने सायदै होलान । पछिल्लो समय काठमाडौंलाई धुलमाण्डु समेत भन्न थालिएको छ । तर, वातावरण विभागको वायु गुणस्तर मापन यन्त्रको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंभन्दा लुम्बिनिको वायु तीन गुण बढी प्रदुषित छ ।
काठमाडौंलाई प्रदुषित शहर भन्ने गरिन्छ । हो, काठमाडौं प्रदिष पनि छ । तर, काठमाडौंभन्दा लुम्बिनिको वायु प्रदुषित छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, वातावरण विभागले काठमाडौंमा जडान गरेको वायु गुणस्तर मापन यन्त्रले काठमाडौभन्दा लुम्बिनिको वायु ३ गुणा बढी प्रदुषित रहेको देखाएको छ ।
बिहिबार मध्यान्ह हाम्रो टीम पुल्चोक स्थित वातावरण विभाग पुग्दा रत्नपार्कको हावाको गुणस्तर रियल टाइम पीएम २६ दशमलव ९ थियो । तर, लुम्बिनीको पीएम ९० दशमलव १ देखियो । यो रिपोर्टलाई नै आधार मान्ने हो भने लुम्बिनीको हावा स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानिकारक छ ।
बिहिबार मध्यनहको रियल टाइम डाटा हेर्दा काठमान्डौंभन्दा धुलिखेलको हावा बढी प्रदुषित देखियो । त्यो समय, धुलिखेलको पीएम ३० दशमलव ९ थियो । त्यस्तै, सफा र स्वच्छ शहर भनेर चिनिने पोखराको हावा पनि कम प्रदुषित देखिएन । वायु गुणस्तर मापन यन्त्रको रियल टाइम हेर्दा पोखराको हावाको गुणस्तर पीएम २८ दशमलव ३ भेटियो ।
यो तथ्याङक हेर्दा काठमडौंको शंखपार्कको हावाभन्दा पोखराको हावा बढी प्रदुषित देखियो । त्यही समय काठमाडौंको शंखपार्कको वायु गुणस्तर पीएम १४ दशमल १ मात्र थियो । अन्य शहरको तुलनामा कम वायु प्रदुष रहेको रिपोर्ट रहेपनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । काठमाडौंमा वायु प्रदुषण बढ्ने क्रम तीब्र रहेको विभागको भनाइ छ ।
विभागले तोकेको मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो देशका सबै शहरको हावा प्रदुषित छ । तर, राजधानीभन्दा राजधानी बाहिराका शहरहरुमा प्रदुषण बढी हुने गरेको पाइएको छ । काठमाडांैमा सवारी साधन र सडक बिस्तार लगायतका कारण वायु प्रदुषित हुने गरेको छ ।
लुम्बिनिमा भने सिमेन्ट फ्याक्ट्री र इँटा भट्टाका कारण वायु प्रदुषण बढेको हो । वातावरण विभागले पीएम् ४० सम्मलाई प्रदुषित हावा मान्ने गरेको छैन । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने पीएम २५ कटेपछि हावालाई प्रदुषित मान्ने गरेको छ ।